Soosaarida timaha timaha OEM Haweenka Soprano Ice Diode Laser Machine Qiimaha Waxsoosaarka iyo Warshada |Lumzues
Marka laysarka soo saaro, nidaamka leh tignoolajiyada qaboojinta gaarka ah, qabooji maqaarka oo ka ilaali maqaarka in uu dhaawacmo oo gaadho daaweyn aad ammaan iyo raaxo leh.
Alex 755nm:Mawjadda dhererka 755nm waxay ku siin kartaa tamar ku filan si ay u nuugaan kooxaha melanin, kuwaas oo loo isticmaali karo noocyada ugu ballaaran ee noocyada timaha iyo midabada, gaar ahaan midab khafiif ah iyo timo dhuuban.
Diode 808nm:Mawjada dhererka caadiga ah ee timaha laysarka, heerka gelitaanka follicle timuhu waa sarreeyaa, soo noqnoqdana waa dhakhso.Codsadayaasha aagga bar-weyn waxay buuxiyaan ujeeddada daawaynta degdegga ah.
YAG 1064nm:oo leh heerka nuugista melanin hoose, gaar ahaan daawaynta maqaarka madow.
√ Tamar aad u sareysa: 3000W
Isticmaalka jiilkii ugu dambeeyay ee lasers, cabbir yar iyo tamar sare.
365g Codsadaha Iftiinka Urltra
Codsadaha ultra-light waa sahlan tahay in la shaqeeyo, taasoo yareyneysa culeyska saaran hawlwadeenka.
√ Codsadayaasha Isku-buufinta Barafka Gaarka ah ee Patented
Cryo-suuxinta kahor daawaynta, iyo maqaarka qaboojiya daaweynta ka dib.Codsadayaasha barafka lagu dabaqay waxay noqon karaan kuwo hooseeya ilaa -15 °.Waxay beddeshaa baraf-dhaqameedyada, waxay yaraysaa xanuunka iyo timaha ka saarista.
√ Qaboojin Awood leh
Qaadashada nidaamka qaboojinta TEC, qaboojinta xiriirka, xoojinta raaxada.
√ Semi-conductor USA gaar ah
√ Talyaaniga Qulqulka Joogta ah ee Biyaha Bamka
√ Germany Dilas koronto dhaliyaha laser si loo hubiyo waxqabadka cajiibka ah.
√ La caddeeyey inuu ugu badbaado badan yahay dhammaan noocyada maqaarka, xitaa maqaarka maqaarka oo dhan
Joogtada ah Ka saar timaha aan loo baahnayn ee ku saabsan qaybaha kala duwan ee jidhka bini'aadamka.
Nooca maqaarka (I-VI) & midabka timaha iyo qaabka la isku hagaajin karo.
Nooca Laser Diode Laser
Tirada Laser-ka Jarmal Dilas baararka
Dhererka Mawjada Laser 808+755+1064nm
Hagaha Iftiinka Crystal Sapphire
Cabbirka Goobta 15x30mm
Soo noqnoqoshada soo noqnoqda 1 ~ 20HZ
Ballaca garaaca 10-400ms
Cufnaanta Tamarta 1 ~ 120j/cm²
Laser Heerkulka Qaboojinta -5 ℃ - 5 ℃
Bixinta Korontada AC230V, 50Hz / AC110V, 60Hz
Nidaamka qaboojinta Hawada + Biyaha + Semiconductor + Sapphire
Qaboojinta Laser Heerkulka Biyaha 20 - 30 ° C
Isticmaalka Korontada 2000VA
Awood lagu qiimeeyay 3000W
Hore: Iftiiminta Sheer Alxander Diode Laser 808Nm Timaha Ka Saaridda Mashiinka Shakhsiyeedka
Xiga: Alma Platinum 808Nm Diode Laser Rejuvenation Maqaarka Quruxda
Iftiin Sheer Alxander Diode Laser 808Nm Hair Rem...
Tec Qaboojinta Joogtada ah ee Timaha Salon ee Jirka
Alma Platinum 808Nm Diode Laser Laser Rejuvenati...
Dhammaan Taxanaha Diodes-ka Awoodda Sare ee Diode Laser 755 80...
Mashiinka Salon timaha ka saara Laser-yaqaanka B...